ခွက်ပဲ့လေး တစ်လုံး 一只破碗 - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
ခွက်ပဲ့လေး တစ်လုံး 一只破碗
Posted by ukkmaung on November 20, 2012 at 10:00pm
ဒီပုံပြင်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ဖူးသူလည်း ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ဖူးသူလည်း ရှိကောင်းရှိမယ်။ ခပ်ဆင်ဆင် ဇာတ်လမ်းမျိုးလည်း ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဖတ်ဖူးတာလေးကို ရင်ဘတ်နဲ့ထပ်တူ ပြန်ခံစား လိုက်ပါတယ်။
ချကျွေးတဲ့အစာကို စားပြီး အဘွားအိုဟာ မမြင်မစမ်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲ သွားပြီး ကိုယ်စားတဲ့ ခွက်ပဲ့ကို ဆေးကျောရပြန်တယ်။ ဒါဟာ အဘွားအိုရဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ချွေးမက ဘယ်တော့မှ အဲဒီခွက်ပဲ့ကို ဆေးကျော မပေးခဲ့ဘူး။
“ကလေးက ကလေးနေရာမှာ နေစမ်း။ အသက် ၇ဝကျော် မျက်စိကန်းနေတဲ့ အဘွားကြီးကို အိမ်ပေါ် တင်ကျွေးထားတာ မလုံလောက်သေးဘူးလား? သူစားတဲ့ခွက်ကို ငါက ဆေးပေးရဦးမှာလား? အဲဒီခွက်သုံးလို့ ရသေးတာပဲ ဘာအသစ်လဲနေစရာ လိုလို့လဲ။ အသစ်လဲပေးလို့ မမြင်မစမ်းနဲ့ ကျကွဲသွားရင် ထပ်ဝယ်ပေးနေရဦးမယ်။ ပိုက်ဆံက အလကား ရတာမဟုတ်ဘူး” အသံမြင့်ပြီး ပြောတဲ့ ချွေးမရဲ့စကားကို အဘွားအို အလွတ်ရလုနီးနေပါပြီ။ မျက်စိထောင့်က စိမ့်ထွက်လာတဲ့ မျက်ရည်ကို အဘွားအို ပွတ်သုတ်လိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မြေးကြီးက “အဘွားကလဲကွာ.. ပန်းကန်ကို လုပ်ခွဲလိုက်ရတယ်လို့။ ဒါထမင်း ထည့်စားတဲ့ ပန်းကန်လေ အဘွားရဲ့” ပြောရင်းဆိုရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျနေတဲ့ ပန်းကန်စကို ကောက်ယူပြီး အမေဖက်ကို အသံမြင့် လှည့်ပြောလိုက်တယ်။
သားရဲ့စကားကို ကြားပြီး အမေမှာ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ဘဲ ခေါင်းကိုသာ ငုံ့ထားမိတယ်။ အဲဒီနောက် ထမင်းစားပွဲဝိုင်းကနေ မသိမသာ ထသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ချွေးမရဲ့ အပြစ်တင်သံကို အဘွားအို မကြားခဲ့ရတော့ဘူး။ အဘွားအိုအပေါ်ထားတဲ့ ချွေးမရဲ့ အပြုအမှုတွေလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ မိသားတစ်စုရဲ့ မနက်ဖြန်တိုင်းဟာ နေရောင်ခြည်တွေနဲ့ နွေးထွေးလာခဲ့ပါတယ်။
မူရင်း ရေးသားသူ (Huang Shi Shou) 黃詩愁
林 文山的十九歲兒子宗華終於放暑假回家了。晚餐時，他母親又是魚又是肉，大塊大塊的直往兒子碗裡堆。宗華嚷著：「夠了！夠了！媽，我吃不了那麼多。」然後轉 頭對母親輕聲說：「媽，可不可以也請奶奶她老人家出來，我們全家一起用餐？」他母親嚥下口飯，說：「她瞎了眼，什麼都不方便，在哪兒吃都是一樣，而且她也 習慣了在房裡吃。」可是宗華明白母親的心理，他暗自決定想辦法改變母親對奶奶的態度。
不久，宗華有個摯友來訪，聰明的他為他們想出了一個辦 法。當兄妹倆偷偷地把這個辦法告訴奶奶時，林老太太不敢答應。宗華急著說：「我們是為您好，您就照著做吧！」珮芬也說：「老師告訴我們『百善孝為先』，媽 實在太不該了，您答應吧！」宗華接著說：「奶奶，您能容忍一個不孝的媳婦，可是我們卻不願有個對婆婆不孝的母親。奶奶，就這麼決定了。」林老太太終於勉強 的點了頭。
珮 芬離開飯桌，拖了把椅子給奶奶坐。宗華則對林老太太說：「奶奶，你真是越老越糊塗了，怎麼把碗摔破了？那是吃飯的工具啊！」他轉過頭，發現母親正看著自 己，於是彎腰拾些碎片，攤在手上站起來，提高聲音說：「難怪我媽會生氣，要知道這只碗很重要，如今您摔破了，日後我媽年老時，我用什麼給她盛飯？」